June 2014 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Than Toe Aung at 11:45:00 AM 0
Download Here အဆင်ပြေပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Android Application Mobile Fonts Phone Application
Than Toe Aung at 6:39:00 PM 0
Huawei G730 ဖုန်းများတွင် မြန်မာစာ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာတွဲရိုက်၍မရချင်း
Viber Message တွင်စာများမပေါ်ချင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Special Thank Ko Nay Shein Oo မိုးကုတ် သား
ref - MOF
ref:Ye Lin Aung Kse
Than Toe Aung at 11:00:00 AM 4
အရင်ဆုံး ကွန်ပျူတာမှာသွင်းထားတဲ့ viber အဟောင်းရှိသူများ အရင်ဖြတ်ပါ ပြီးတာနဲ့ http://pc.cd/LJS ဒီfont ကို Download ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ Install ပါ
အခု viber ကို install လုပ်ပါမယ် http://download.viber.com/desktop/windows/ViberSetup.exe မှာ Download လိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Min Oaker at 5:22:00 PM 0
လိုင်းဆွဲအား နည်းတဲ့နေရာကို ရောက်သွားရင် intana
သိပ်မမိတော့တဲ့ အခါ အခုလို တပ်နိုင်အောင်ပါ
အာ့ intana အပေါ်က်ကလေးက
snart phone တိုင်းမှာပါပါတယ်
battery cover ကို ခွါလိုက်တာနဲ့
အာ့ အပေါက်လေးကို ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်
cover နဲ့ ပိတ်ထားလို့မမြင်ရပါဘူး
တချို့ကျတော့ cover ကို့နေရာမှာ
battery covery ကို ချွတ်
Coil ကြိုး အနေတော်လေးကို
အဖျားနားကို ဓါးလေးနဲ့ ချစ်ထုတ်လိုက်
Coil လေးကို အာ့ အပေါက်ထဲက ကြေးနီ ပိုက်အလည်ခေါင်ကို
စိုက်လိုက်ပီ ပြုတ်မထွက်အောင် တိတ်နဲ့ ယာယီထိမ်းထားလိုက်
ပီးမှ ထို COIL လေးကို BATTERY အဖုန်းနဲ့ ဖိပီး ပိတ်ထားလိုက်ပါ
ဖုန်းရဲ့ အပြင်ဘက် 4လက်မလောက်
Credit To - >>>>> Htoo Phyo
Min Oaker at 1:29:00 PM 1
ဖုန်းတစ်လုံးကို Admin တစ်ယောက်လို လုပ်ကိုင်ချင်တဲ့ သူတွေဟာ Root လုပ်ငန်းစဉ်ကို မဖြစ်နေလုပ်ဆောင်ကြရပါတယ် အရင်တုန်းကတော့ ကွန်ပျူ တာနဲ့ မှ Root ဖောက်လို့ရတာပါအခုကျတော့ ဖုန်းထဲမှာပဲ Root လုပ်နိုင်လာပါတယ် အောက်မှာ သားလေ့လာမိတဲ့ ကွန်ပျူ တာမလိုဘဲ ဖုန်းထဲကနေ root လုပ်လို့ ရနိုင်မယ့်Apk လေးတွေကို ပြန်ရှဲပေးလိုက်ပါတယ်
Than Toe Aung at 9:42:00 PM 0
Download အဆင်ပြေပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးဖိုင် hosting တစ်ခုဖြစ်တဲ့ downloadmm
Than Toe Aung at 9:19:00 PM 0
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ မြန်မာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနေချင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
အခု အဲဒီဆန္ဒကို ပြုလုပ်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်လို့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ Online ပေါ်မှာFile တွေတင်တဲ့အခါ နိုင်ငံခြား File Sharing Site တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်က
မြန်မာတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီး Download MM လို့အမည်ရတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် File Upload/Download Sharing Site
Website Link: http://www.downloadmm.com/
-Download MM သည် အင်တာနက်သုံးစွဲသူ မြန်မာတို့အတွက် ဖိုင်များကို Online ပေါ်မှာမျှဝေရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်ပေါ်ပေါက်လာသော
File Sharing Service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
- Download MM ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ Upload/Download လုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
-Site ကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်၍ မည်သူမဆိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်ပါမယ်။
-Download MM တွင်မိမိတို့ရဲ့ဖိုင်များကိုမည်သူမဆို Upload/Download အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
-Premium Download / Slow Download ဟူ၍ ခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါ။ Download ခလုတ်ကိုတန်းနှိပ်ပြီး
Direct Download ရယူနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
- ဖိုင်များဟုဆိုရာတွင် မည်သည့်ဖိုင်မဆို Upload လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
- File size 200 MB ခန့်ရှိသော ဖိုင်အထိ Upload လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (နောင်တွင် ဒီထက်ပိုပြီး MB များများတင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသွားပါမယ်)
-File နှစ်ခု ၊ သုံးခု တစ်ပြိုင်နက် Upload လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
- Download MM ကို Myanmar Mobile App Store မှဝန်ဆောင်မှုပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- Download MM ကိုအသုံးပြု၍ File များကို upload တင်ပြီးမျှဝေနိုင်ကြပါပြီ။
-လောလောဆယ်တော့ Beta အနေနဲ့ ဒီ site ကိုစတင် run ထားပါပြီ။
- အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ Download MM ကိုပိုမိုသိရှိလာအောင် ဒီပို့စ်ကို Share ပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်။
Thet Naing Soe (Myanmar Mobile App Store) အဆင်ပြေပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဂူးဂဲလ်မှာ ကီးဝေါ့ ဝယ်ယူခြင်း
Myanmar IT Helper at 2:57:00 PM 0
အများစု အသုံးပြုကြတဲ့ Google မှာ ကီးဝေ့ါတွေ ဝယ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကလည်း ဂူးဂဲလ်က အဓိက ပြုလုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ ဝယ်ကြသလဲ ဆိုတာ ကတော့ Search Engine ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ကို ပေါ်လွင်နေစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 1:03:00 PM 0
အောင်ရင်ငြိမ်းရဲ့Romanbot's world စာအုပ်
Maung Pauk at 11:23:00 AM 3
နာမည်ကြီးနေတဲ့ အောင်ရင်ငြိမ်းရဲ့Romanbot's world စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်.. တာချီလိတ်နည်းပညာ မှာ Laminmyat(TCK) တင်ထားတာတွေ့လို့ သူ့လင့်အတိုင်းပဲ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
Download : 11.56 MB
Kyaw Myo Tun at 2:31:00 AM 0
မြန်မာမှန်ရင်ဆောင့်ထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဗုဒ္ဓရဲ့ ဘုရားရှိခိုးနည်း အများအပြားပါပါတယ် install လုပ်ပြီး
MPT Service for android
Kyaw Myo Tun at 7:06:00 AM 0
MPT Service apk လေးကတော့
GSM အချင်းချင်းbill ဖြေပေးနိုင်တယ်
GSM ဖုန်းဆိုရင် internet ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်
GSM internet ချိန်နည်းတွေပါမယ်
တင်လိုက်တဲ့ play store for android ခေါင်းစဉ်
နဲ့ play store ကို install လုပ် ပြီး gmail ထည့်ပြီး
အသုံးပြုရမှာပါ မနေ့ကတင်ကတဲ့က ပြောပြထားပါတယ် ယခုလည်း မလုပ်တတ်တဲ့
Min Oaker at 11:45:00 AM 0
Huawei များအတွက် Root မလိုတဲ့ Font Installer အသစ် Emotion UI Fonts Installer v1.2
MMSD က ကိုဖြိုးချမ်းရေးထားတဲ့ Tool ပါ.. သိပ်မိုက်တဲ့ Font ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အသုံးပြုရမှာပါ.. Root မလိုပါဘူး.. Emotion UI ပါတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. သူရေးထားတဲ့အတိုင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
G730-U00 ကော အခြား MTK Devices တော်တော်များများကိုပါ
Support လုပ်ပေးသွားပါတယ်။ Root မလိုသည့်အပြင် Huawei Devices များဖြစ်သည့်
C8813,C8813D,C8815,C8816,C8816D,G6, G730-U00 နဲ့အခြားသော EUI ဖုန်းများကို အလုပ်လုပ်သည်။
Playstore မှာ ဒေါင်းပေးပါအုံး
Download in PlayStore >> https://play.google.com/store/apps/details?id=mmsd.phyochan.miuihuaweifonts
ဒီ App ကို MMSD မှ Free အနေဖြင့် ရေးသားဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
PlayStore မှာ ဒေါင်းဖို့ အဆင်မပြေသူများအတွက် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းဖို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Download : 2.48 MB
Dell Drivers PC Drivers
Dell Inspiron (15) 3520 Drivers Download For Windows7(32bit)
Dell Inspiron (15) အတွက် Driver တစ်ခုချင်းစီ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်... Windows732bit(x86) အတွက် ဖြစ်ပါတယ်..
CirrusLogic High-Definition Sound Driver
Intel Management Engine Interface (Intel MEI) Driver
Intel-7Series Chipset – SATA AHCI Controller Driver
WLAN: Dell Wireless 1704 802.11b/g/n (2.4GHz) Driver
D400 External USB 56K Modem Driver
Wireless 1506 802.11b/g/n Driver
REALTEK -Ethernet Controller Driver
Intel HD Graphics,Intel HD Graphics 3000,Intel HD Graphics 4000 Driver
Android Terminal Emulator 1.0.62 APK
Android Terminal Emulator ဆိုတာ Terminal နဲ့ command ပေးပြီး Android ပေါ်မှာ ခိုင်းစေလို့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်.. Linux ကို အခြေခံထားတဲ့ Open Source ဖြစ်တဲ့ ဒီ Android Terminal Emulator ကို Developer တွေ အများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်.. Linux မှာ Software တင်တာတို့၊ အခြား ခိုင်းစေတာတို့ကို Terminal ကနေ ခေါ်ပြီး ခိုင်းသလို Android ပေါ်မှာလည်း Android Terminal Emulator ကိုသုံးပြီး Command ပေးခိုင်းစေနိုင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလောက်ပဲသိပါတယ်.. ဗားရှင်းသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Download : 504 KB
Min Oaker at 9:13:00 PM 0
Min Oaker at 8:58:00 PM 0
ဒါလေးကို သာဆောင်ထားရင် setting ထဲမှာ ၀င်ရှာစရာမလိုတော့ သွားချင်တဲ့ ဆီကိုသာ Key တွေ ရိုက်လိုက် ရောက်သွားလိမ့်မယ် OK
ဖတ်ရှုရတာ လွယ်ကူအောင် PDF နဲ့ ထုတ်ထားပေးပါတယ်
Download : (1.02)MB
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 1:10:00 PM 1
Min Oaker at 11:46:00 AM 0
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ...... သားတင်ပေးလိုက်တဲ့ Font တွေကို Install လုပ်ပြီး ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဘယ်မှာရှာရမလဲ လာမေးနေကြလို့ ဒီမှာပဲဖြေပေးလိုက်ပါ့မယ် font သုံးခုပါတယ်
metrixhp.apk Root လိုတယ်
install လုပ် open လုပ်
permission တောင်းရင် allowပေး ပီးရင် ကြိုက်တဲ့ font နှိပ် ok ဆက်နှိပ် reboot လုပ် နဲနဲ အ၀င်အထွက် နှေးတယ် ပေါ်အောင်စောင့်ပီးနှိပ် ခွနှိပ်မနေနဲ့ ခိခိ
ဒါက metrixhp ifont
setting/ display မှာ
font style change လို့ရတဲ့ ဖုန်းတေအတွက် (root မလို)
ဒါက နောက်အဆုံးအဆင့် ဘာနဲ့မှ မရတဲ့သူတေအတွက် default font zip
root လိုတယ် root explore ဖွင့် သုံးချင်တဲ့ font ကို copy ယူပီး
system/ fonts folder ထဲမှာ
paste လုပ် replace တောင်းရင်
yes လုပ် ပီးရင် reboot လုပ်
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...............................
Restaurant Manager V-1.0 စားသောက်ဆိုင်သုံး ကွန်ပျူတာစနစ် (Free Version - Free Download)
Maung Pauk at 3:47:00 AM 0
**** ကွန်ပျူတာတွင် ရှိရမည့် လိုအပ်ချက် ****
Microsoft Office 2007 (သို့) 2010
**** အကြမ်းဖျဉ်း သုံးစွဲနည်း *****
- မိမိဆိုင်နာမည်အဖြစ် ပြင်ဆင်မယ် ဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်မယ်
- Table တွေ သတ်မှတ်မယ် ဥပမာ Table - 1 Table -2စသဖြင့်ပေါ့
- Menu တွေ ထည့်မယ်
ဥပမာ - Red Label (1 liter) = 8000 Ks
- Red Label (1 puck) = 1000 Ks
- ဘယ်ဝိုင်းက မှာတယ်ဆိုတာကို သိရအောင် အရင်ဆုံး Table ကို Select ပေးမယ် .. ရောင်းမယ့် စားသောက်စရာရဲ့အမည်ကို တစ်လုံးလောက်ရိုက်ပြီး ရှာမယ် ... Arrow Key တွေ သုံးပြီး မှာတဲ့ စားသောက်စရာပေါ်ကို ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ Enter နှိပ်ပြီးစာရင်းသွင်းမယ် ....
မလိုရင် ဖျက်မယ် .. နောက်တစ်ဝိုင်းဆို အဲ့အတိုင်းအစကနေ ပြန်လုပ်ပေါ့ ... ။
ပြီးရင် City Mart တွေမှာ ထုတ်ပေးတဲ့ Slip Voucher ထုတ်ပေးလို့ရမယ် .. မထုတ်လဲရတယ် ... ။
- Summary မှာ တစ်နေ့စာ အရောင်းစာရင်း / လအလိုက် အရောင်းစာရင်းပြန်ကြည့်လို့ရမယ်
- Waiters ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ လစာရှင်းတမ်းပါမယ်
ကျန်တာကတော့ သုံးရင်းနဲ့ စမ်းကြည့်ပေါ့နော်
မြန်မာလို ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဗီဒီယိုလည်း YouTube မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် .... ။
ဒါကတော့ စမ်းသပ်သုံးစွဲပြတဲ့ ဗီဒီယိုပါ .....
မှတ်ချက် - ယခုဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် အခမဲ့ စမ်းသပ်သုံးစွဲရန် ဖြစ်သောကြောင့်
Table ၀ိုင်း ( ၅ ) ၀ိုင်းစာသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည် ... ။
၄င်း ကန့်သတ်ချက်မရှိတော့မည့်အပြင် အသေးစိတ် ညွှန်ကြားမှုများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများကို ကြိုဆိုပါသည် ... ။
သုံးစွဲရာတွင် အဆင်မပြေမှုများ ရှိပါက အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်း
Restaurant Manager V-1.0 Download : 3.9 MB
Min Oaker at 11:24:00 PM 0
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒါလေးကတော့ Font စတိုင်လ်ပြောင်းပြီး စမ်သုံးကြည့်ချင်သူများအတွက် ကိုထူးဇော်ဖြိုးရဲ့ လက်ရာလေးပါ။။။ အရမ်းမိုက်ပါတယ်စမ်းသုံးကြည့်ကြပါခင်ဗျာ... အောက်မှာ ဖောင့် (3)မျိုးတင်ပေးထားပါတယ်
(1)Download : (43.3)KB
Zippyshare (2)Download : (77.6 )KB
Zippyshare (3)Download : (49.8 )KB
Phone Application Root Tools SONY
Sony Xperia Z2 ကို UNLOCK BOOTLOADER လုပ်စရာမလိုတဲ့ Root Tool တစ်ခု ရလို့
ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Tool ကတော့ XDA-Developer site မှ ရရှိလာပြီး
ကို မောင်သူ မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Tool လေးပါ။
Buildnumber 17.1.A.2.55/.69 နှစ်မျိုးလုံးပေါ်မှာအလုပ် လုပ်ပါတယ်။
Credit : မောင်သူ & Aye Min Kyaw
Computer မှာ Live Screensaver ကို ပင်လယ်ထဲရောက်နေသလို HD အပြည့်ခံစားရစေမယ့် Dream Aquarium 1.29 Virtual & Screensaver ဖြစ်ပါတယ်..
Download : 83.85 MB
Root Checker and Unroot Pro v1.5
Maung Pauk at 4:17:00 PM 0
-မိမိတို့ဖုန်းကို Root ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့နဲ့ တကယ်လို့ရရှိထားတဲ့ Root Access ကို ပြန်ဖျက်ချင်ရင် Unroot ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် " Root Checker and Unroot Pro v1.5" ဆိုတဲ့ PRO Version Application လေး တစ်ခုကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ-
-Busybox version စတာတွေကိုလည်း ကြည့်ရှုလို့ရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
-Apk File Size 376KB ရှိပြီး
-Android OS Version 2.1 နှင့်အထက်ရှိသော ဖုန်းများမှာထည့်သွင်း install ၍အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ
Credit : ကိုဇော်သွင်
ဓါတ်ပုံတွေကို ကာတွန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ Caricature Software Photo to Cartoon 7.0.5281.36901
Maung Pauk at 2:21:00 PM 0
Caricature Software Photo to Cartoon ကတော့ ဓါတ်ပုံတွေကို Caricature ပုံတွေအဖြစ် ရုပ်ပြောင် သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကာတွန်းပန်းချီကြမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ဟိုအရင်တစ်ခါက နိုင်ငံတော်သမ္မကြီးပုံ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတွေကို နံရံတွေပေါ်မှာ ရေးဆွဲခဲ့လို့ လူသိများလာတဲ့ Caricature ပုံမျိုးပေါ့ဗျာ..
Photo to Cartoon converts photographs into color drawings or cartoons in justafew clicks. Foraquick step-by-step guide please watchashort Video Tutorial that demonstrates the transformations below.
Download : 7.53 MB
Min Oaker at 1:42:00 PM 0
Maung Pauk at 10:12:00 PM 1
Huawei G700-T00 Official Firmwares list
Kyaw Myo Tun at 4:16:00 PM 0
service သမားတွေနဲ့ အခြားမိတ်ဆွေတွေ
(G700-T00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC01B122,China Mobile)
(G700-T00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC00B124,China Mobile)
(G700-T00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC00B130,Mobile channels)
(G700-T00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC01B131,China Mobile)
(G700-T00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC01B135,China Mobile)
(G700-T00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC00B136,Mobile channels)
ရေနီသား ဖြိုးလေး at 1:06:00 PM 0
Than Toe Aung at 6:23:00 PM 0
အဆင်ပြေပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ..
Huawei G610-U00 Firmware List:
Kyaw Myo Tun at 4:45:00 PM 0
(G610-U00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC17B127,China Unicom)
(G610-U00,Android_4.2,Emotion_UI,V100R001CHNC00B130, China Unicom)
(G610-U00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC17B135,China Unicom)
(G610-U00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC00B136,Unicom channel)
(G610-U00,Android_4.2,Emotion_UI,V100R001CHNC17B144,China Unicom) (G610-U00,Android 4.2,Emotion UI,V100R001CHNC17B145,China Unicom)